Ra’iisul wasaaraha Lesotho: “Inta aan xilka hayo la ima maxkamadeyn karo” | Hangool News
Ra’iisul wasaaraha Lesotho: “Inta aan xilka hayo la ima maxkamadeyn karo”
February 25, 2020 - Written by Hangool News 1
Qareenka ra’iisul wasaaraha dalka Lesotho oo loo heysto dembi ah in uu dil geystay ayaa maxkamadda u sheegay in ra’iisul wasaaraha aanan loo maxkamadeyn karin eedeymaha loo heysto ee ah in uu wax ka ogaa dilka xaaskiisi hore.
Qareenka ayaa ku dooday in ra’iisul wasaare Thomas Thabane uu yahay qof xasaanad leh, haatanna aanan loo qabsan karin dilka xaaskiisi hore, Lipolelo Thabane oo la dilay sanadkii 2017-ka.
Qareenka difaacaya ra’iisul wasaaraha oo lagu magacaabo Qhalehang Letsika ayaa sheegay in marnaba aanan la maxkamdeyn karin madaxa xukuumadda inta uu xafiiska hayo, balse uusan ka sareynin sharciga.
Mr Thabane, oo ay da’diisu tahay 80 sano jir ayaa ka baaqsaday in uu maxakamadda yimaado toddobaadkii lasoo dhaafay, kadib markii dalka Koonfur Afrika uu u aaday hawla caafimaad.
Image captionHaweeneyda la dilay
“Booliska waxay hataan ka shaqeynayaan sidii maxkamad loo soo taagi lahaa”, ayay sheegeen booliska Lesotho.
Sidoo kale taliye ku xigeenka booliska Lesotho, Paseka Mokete ayaa isna xaqiijiyay in ra’iisul wasaaraha maxkamad lasoo taagi doona.
Mr Thabane oo maalma kahor la hadlay warbaahinta Qaranka ee dalkaasi ayaa sheegay in dalkiisa uu ugu adeegay si hufan, xilkana uu ka degi doona bartamaha sanadkan, waxaana uu yiri: “Waxaan ka shaqeeyay Lesotho xasiloon oo nabad ah, da’da aan haatan joogana waxaa muuqto in aan daalay”.